Siyaasa Itoophiyaa: Hiriirtonni embaasii Itoophiyaa Landan cufsiisan, mootummanis muufii qabu ibseera – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSiyaasa Itoophiyaa: Hiriirtonni embaasii Itoophiyaa Landan cufsiisan, mootummanis muufii qabu ibseera
Siyaasa Itoophiyaa: Hiriirtonni embaasii Itoophiyaa Landan cufsiisan, mootummanis muufii qabu ibseera
Hawaasni Oromoo UK imbaasii Itoophiyaa magaalaa Landan jiru fuulduratti hiriira bahuun imbasicha torbee tokkoof cufsiisanii akka jiran kanneen hiriira bahan BBC’tti himan.
Hiriirtonni kunneen alaabaa Itoophiyaa gamoo imbaasichaa irratti fannifamee jirullee buusuun alaabaa Adda Bilisummaa Oromoon bakka buusanii jiru.
Namoota hiriira bahan keessaa tokko kan ta’e weellisaa Shukrii Jamaal Oromoonni magaalicha jiraatan imbaasichi akka hin saaqamne gochuuf torbee tokkoof achi bulaa akka jiran BBC’tti hime.
Shukriin imbaasiin Itoophiyaa Landan jiru hiriira mormii bahame hordofuun erga cufamee guyyoota 6 ta’eera jedha.
Imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Landanitti argamuu toora Twitter gubbaatti Kibxata akka ibseetti, hiriirtoonni muraasni mormiif imbaasicha dura turan hojjataasaanii tokko reebuu fi hojiin maamila keessummeessuu gufateera jedha.
Hojjataan isaa wayyaa’u ibsuun, namoonni reebicha raawwatan poolisiin to’achuu fi namoonni kun seeratti akka dhiyaatan poolisii UK wajjiin akka hojjatu qofa ibseera.
Gaaffilee hiriirtonni kaasanii fi sababa isaan mormiif imbaasicha duratti bahan ilaalchisuun waan jedhe hin qabu.
Namoonni 100 ol ta’an naannoo Imbaasichaa bulanii karra imbaasichaa ugguruun imbaasichi akka banamee hojii hin eegalle mormii erga eegalanii torbee tokko ta’eera.
Amma dura mormiiwwan imbasii fuulduratti bahuun baramaa turullee imbasii cufsiisuun waan baratame miti.
‘’Waanti nu as jirruuf imbaasiin kun akka hin hojjanneefi,” jedha wellisaa Shukrii.
‘’Sababni baanee dhagaa asfaaltii kanarra bulaa jirruuf, hidhamtoonni siyaasaa hidhaarraa akka hiikamani, waraanni Oromiyaa keeessa akka bahuufi gaaffiin uummata Oromoo guutummaatti akka deebi’uufi.”
Lammiilee Imbaasii Itoophiyaa Landan jiru fuuldura mormiif baane jedhan
Imbaasichi karaa dippiloomaasiitiin akka mootummaa biyya UK ‘sobaa jiran’ agarsiisuu barbaanne, mootummaan UK gargaarsa mootummaa Itoophiyaaaf kennuu akka dhaabuufi, jedhe. Imbaasii cufsiisuuniifi namni akka hin seenne dhorkuun seeraan isiin hin gaafachiisuu jedhame kan kan gaafamtame Shukriin: ”Hooggantoonni siyaasaa keenya mana hidhaatti dararamaa, weellisaan nu jaalannu Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamaa, imbaasiin kun banamee arguurra, nuti mana hidhaa seenuu wayya ykn lubbuun keenya darbuu filanna,” jedhe. Imbaasichi akka waan jeequmsa uumanitti poolisii UKtti himee akka naannicha gadhiisanii akka deeman dirqisiisuuf yaaluu dubbata.
Poolisoonni hojjattoonni imbaasichaa seenanii akka hojiisaaanii itti fufan hiriirtotatti himanillee, fudhachuu diduu dubbata Shukriin.
Wiixata darbe Poolisoonni 100 ta’an humnaan naannicha gadhiisisuuf yaalanii boodarra akka dhiisan dubbata.
Sababa kanaan namoonni 11 hidhamanii turan booda gadhiifamuu fi dubartiin tokko dhaaanamtee hospitaala seentellee yaalamtee baate jedhe Shukriin.
Imbaasichi sagalee namoota biyyatti keessa jiranii ukkaamsuun akka biyyattii jeeqnutti mootummaa UK soba jedhee komata Shukriin.
Hojjetaan imbaasichaa maqaa koo hin dhahinaa jechuun BBC’f yaada kenne erga mormiin kun eegalee as hojjettoonni imbaasichaa nageenya isaaniif yaadda’anii mana akka jiran hima.
Mootummaan Itoophiyaa mufateera’
Qondaalli Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Reeduwaan Huseen rakkoo Imbaasii Itoophiyaa Landan jiru mudate ilaalchisee, qondaala Imbaasii UK Finfinnee jiru waliin mari’achuu Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa beeksiseera.
Akka ibsi ministeerichi fuula Facebook isaarratti baase jedhutti, rakkoo nageenyaa Imbaasii Itoophiyaa Landan jirurra gaheen mootummaan Itoophiyaa komii fi mufannaa qabu ibsate.
Ambaasaaddar Reeduwaan mootummaan UK nageenya imbasii Itoophiyaa Landan jiruu fi kan hojjettoota isaa eeguuf dirqama akka qabu yaadachiisaniiru.
Imbasii UK Finfinnee jirutti ‘Charge d’affair’ ykn ambaasaaddara itti aanaa kan ta’an Aleeks Kameroon rakkoo mudateef dhiifama gaafatanii, tarkaanfiin barbaachisaa akka fudhatamu waadaa galuu isaanii ibsichi ni hima.
BBC’n dhimma hiriira mormii akkasumas hojii dhaabuu irratti Imbaasicha dubbisuuf yaalee hin milkoofne
DemocracyWatch: Saudis slaughter Ethiopian refugees at border
Ethiopia: – Government’s Use of Covid-19 Pandemic as a Political Weapon to Punish Citizens in Sidama and Oromia.